Nagarik News - जनताः दुर्गाभन्दा ठूलो शक्तिको प्रतीक
यसपटक गजबको संयोग परेको छ। राजनीति गर्नेहरूको ठूलो पर्व निर्वाचन र नेपालीहरूले ठूलो चाड दसैँ एकै 'सिजन'मा परेको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि मैदानमा उत्रिएका नेताहरू मतदाता समक्ष पुग्ने 'पिक टाइम' मा दसैँको उल्लासमय वातावरण छ। चाडबाड मनाउन व्यस्त नागरिकसँग नेताहरू भोट मागिरहेको दृश्य यो दसैँमा सम्भि्कनलायक हुनेछ। जनताको आँगनमा पाहुना र आफन्तमात्र होइनन्, भोट माग्न आउने नेताहरू पनि हुनेछन्।
असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाइने चाड दसैँमा राजनीतिमा हुनेगरेका असत्य तथा असुर प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि कुरा उठ्नेछन्। दसैँमा फुर्सदिला बनेका सर्वसाधारणले गर्ने गफमा मासुको स्वादभन्दा राजनीतिक 'टेस्ट'का कुरा बढी हुने पक्का छ। कुन क्षेत्रको उम्मेदवार कस्तो? कसको पोजिसन के होला? यस्तै हरहिसाबमा यो दसैँ व्यतीत हुनेछ। दसैँ गफमा निर्वाचनमा भाग नलिएका वैद्यहरूको चर्चा पनि उत्तिकै हुनेछ। आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी मत जुटाउन क्रियाशील उम्मेदवारहरू दसैँको बहानामा जनताको घरमा आशीर्वाद थाप्न जाने मेसो जुरेको छ। निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि चाडबाडको अवसरमा हुने चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रम उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्। दसैँको टीका तथा आशीर्वादका लागि ससुराली, माइत, मावली गर्नेहरूबीच पनि कुन गाउँमा कुन पार्टी बलियो भन्ने गफ आदानप्रदानको मेसो जुट्नेछ। निर्वाचनका लागि जुटेको देशमा बीचमा परेको ठूलो चाडले जनताको क्रियाशीलतालाई अझै बढाउने निश्चित छ।
यो निर्वाचनमा जनताले केही कुरामा हेक्का राख्न सकेनन् भने फेरि पनि परिवर्तनप्रतिको चाहना पूरा हुँदैन। निर्वाचनमा खडा भएकामध्ये परिवर्तनको पक्षमा उभिएका र जनतासँग बढी इमानदार देखिनेहरूको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताबाट उठेकाहरू यो निर्वाचनमा विजयी हुनुपर्छ। वरिष्ठको नाममा पदको पगरी गुथेर बस्नेहरूलाई जनताले किनारा लगाउनुपर्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पराजितहरू देश चलाउने कार्यकारी पदमा पुगेका थिए। अहिले पनि ठूला भनिने नेताहरू दुई/दुई स्थानबाट निर्वाचन उठेर आफ्नो 'पोजिसन' जोगाउने ध्याउन्नमा छन्। ठूला भनिएका नेतामा नै आत्मविश्वासको कमी देखिएको छ। जे जति 'योङ लिडर' चुनावी मैदानमा छन्, उनीहरूको पक्षमा जनमत उभिनुपर्छ। राजनीतिलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पनि युवा नेता बढीभन्दा बढी विजयी हुनुपर्छ।
वैद्यहरू सहभागी नभएको यो निर्वाचन स्वादिष्ट भोजनमा लागेको ढुंगा नहोला भन्न पनि सकिन्न। विगतमा सशस्त्र विद्रोह गरेको एउटा शक्तिलाई बाहिर राखेर हुन लागेको यो निर्वाचनमा थुप्रै चुनौती छन्। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संविधान निर्माणका क्रममा आउने उल्झन र संविधान बनेको दिनदेखि नै यसको विरुद्ध हुने विरोधका बीच नयाँ नेपाल निर्माणको यात्रा त्यति सजिलो छैन।
विभिन्न कठिनाइ र चुनौतीका बीच खसीको कबाफ खाँदै निर्वाचनको गफ गर्न जुरेको यो मेसोलाई सदुपयोग गर्दा नै हामीले यो अन्योलबाट निकास पाउनेछौँ। कतिपयको 'रिडिङ' वैद्यहरू निर्वाचनमा आउनै चाहेका थिएनन् भन्ने छ। तर, वैद्यहरूलाई निर्वाचनमा आउनै नदिने वा 'इग्नोर' गर्ने जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यसमा उनीहरू अटाउने स्पेस नै थिएन। जसले जसरी व्याख्या गरे पनि यो प्रक्रियामा ठूलो त्रुटी भइसकेको छ। त्रुटी हुँदाहुँदै पनि जनताले मतदानमार्फत व्यक्त गर्ने अभिमतलाई वैद्यहरूले पनि बेवास्ता गर्न पाउँदैनन्। निर्वाचनका लागि चाहिने भयरहित वातावरण बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी संयम यसको विपक्षमा रहेकाहरू नै हुनुपर्छ। वैद्यहरूले हिंसारहित निर्वाचन बहिष्कारमा आफूलाई टिकाउनसके भने उनीहरूको राजनीतिक इमान प्रस्ट हुनेछ। निर्वाचनपछि पनि उनीहरूले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना असहमतिका स्वरहरूलाई उत्तिकै सशक्त ढंगले उठाउन सक्नेछन्। वैद्यहरूको राजनीतिक 'करिअर'का लागि उनीहरूको तर्फबाट निर्वाचनमा कुनै किसिमको हिंसात्मक गतिविधि हुनुहुन्न। शान्तिपूर्ण बहिष्कारको बाटो हिँडिरहँदा उनीहरूको राजनीतिक 'करिअर'मा कालो दाग लाग्न पाउनेछैन।
मिलन र रमाइलको यो पर्वमा राजनीति पनि त्यही अनुरूप भइदिएको भए उत्तम हुन्थ्यो। असहमतिका बीच चल्नपर्ने विधि भएकाले होला, राजनीतिमा पूर्ण सहमति 'हाइपोथेटिकल' कुरामात्र हो। त्यसैले देशमा दसैँ मान्ने र नमान्नेहरू भएजस्तै निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने दुई खेमा छुट्टिएका छन्। निर्वाचनलाई लिएर राजनीति विभाजित नभइदिएको भए नै राम्रो हुने थियो। मानिसले चिताएको सबै कहाँ पुग्छ र? परिस्थिति जसरी अघि बढेको छ, त्यसबाट बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा नै जनताले सुख एवं उमंगका साथ चाडबाड मनाउने र सुख–सुविस्ता पाउने हो। निर्वाचनलाई लिएर राजनीति बाँडिए पनि निर्वाचनका कारण हिंसाको पुनारावृत्ति नहोस्। एउटै निर्वाचनले देशका सबै समस्या हल गर्न नसके पनि विधि र पद्धति निर्माणमा यसको योगदान हुने भएकाले नै निर्वाचनमा जनताको विश्वास रहेको हुन्छ। राजनीतिक दल तथा तिनका नेताको ताकत पनि निर्वाचनबाट थपिने भएकाले उनीहरूका लागि पनि यो अपरिहार्य हुन्छ। शक्तिकी प्रतीक देवीको आराधनामा बित्ने यो पर्वमा नेताहरूले राजनीतिमा विशेष शक्तिका रूपमा रहेका जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरुन् र त्यसै अनुरूप आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरुन्। जनता दुर्गाभन्दा ठूलो शक्तिको प्रतीक हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझुन्। यो दसैँमा यही कामना गरौँ। नेपालीको ठूलो चाड विजया दशमीको अवसरमा सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना।